Warbixinta Radio Daljir ee Wasiir Gallan & Gobolka Sanaag, xoreyn kabacdi (dhegayso) – Radio Daljir
Warbixinta Radio Daljir ee Wasiir Gallan & Gobolka Sanaag, xoreyn kabacdi (dhegayso)
Juunyo 7, 2019 8:41 g 0
Gobolka Sanaag kahor tagitaankii Wasiir Gallan waxa uu ahaa gobol tafaraaruq hareereeyey. Waxa uu ahaa gobol ay Somaliland u matalaan horjoogayaal siyaasiyiin-isku-sheeg ah inta dadka reer Sanaag ugu liidata. Waxa uu ahaa gobol hoggaankiisa Puntland ayana aysan wax badan kala hagin. Gobolka Sanaag waxa uu shantii sano ee la soo dhaafay noqday gobol saraakiisha iyo siyaasiyiinta Soomaali-diidku markay rabaan yimaadaan, kay rabaan la qayilaan, kay rabaanna la casheeyaan.
Dhegayso oo hoos kaga bogo:
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20300
MAANHADAL: Xiisada xoreynta gobalka Sanaag (dhegayso | daawo)